I-Mini Groove Deep Ball Bearings I-Basic Piece Of Machinery - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
I-miniature Deep Groove Ball Bearings Umshini oyinhloko wemishini
Ngokujwayelekile uzokwazi ukuthi ukuhlanganiswa okuhlangene kuyisici esiyisisekelo semishini, embonini idlala indima ebalulekile. Esimweni se-China sokubambisana kwemboni isimo? Ake sihlaziye ndawonye!
Kuyaqondakala ukuthi ukukhiqiza okuhlangene kweChina okukhiqizayo emashumini ambalwa eminyaka adlule kuye kwaba ukuhlanganiswa kwamazwe ngamazwe omunye amazwe amakhulu akhiqiza, anesimo esithile esiphezulu. Futhi i-China isivele inesisindo esithile sezomnotho, ukubalwa kwezingxenye ze-market global bearing bearing market, isamba sesithathu emhlabeni.
Ukukhiqiza kubuye kujabulise. Kodwa ngokwezobuchwepheshe, uma kuqhathaniswa nomkhakha wokubambisana womhlaba jikelele, kukhona igebe elithile kwezobuchwepheshe. Ngokuyinhloko emikhiqizweni ephakeme kakhulu, ephezulu kanye ne-value-added, inani lephansi, nokuzinza kwemikhiqizo yokubambisana kanye negebe elithile. Lokhu kufanele kuthuthukiswe. Kodwa ngokujwayelekile ungakwazi ukuhlangabezana nezidingo zomnotho kazwelonke kanye nokwakhiwa kwezokuvikela kazwelonke!
Ngokuvamile, imboni ehlangene ye-China noma ukuhlangabezana nezidingo, kodwa ubuchwepheshe buzoqhubeka ngcono! Amapayipi ama-micro-deep groove kufanele afakwe ngephethiloli noma i-diesel ngaphambi kokuhlanza, ukusetshenziswa okumile, nokuqinisekisa ukugcoba okuhle, ukubhebhetheka kahle kwamabhola amabhola ngokuvamile okugcoba, kungasetshenziswa futhi ukugcoba ngamafutha. Uma usebenzisa ukugcoba kwamafutha, akufanele kusetshenziswe ukungcola, ukulwa ne-oxidation, i-rust, ukucindezela okukhulu kanye nokusebenza okuhle kakhulu kwamafutha. Gcoba ivolumu yokugcwalisa ama-ball bearings amancane okujulile webhola kanye ne-micro-deep groove ball bearing bearing volume of 30% -60%, akufanele kube kakhulu. Ngesakhiwo esivaliwe se-micro-deep groove ball bearings agcwele amagesi, umsebenzisi angasebenzisa ngokuqondile, ayikwazi ukuhlanzwa.
I-groove encane yemigodi yebhola ibhalisiwe, ama-micro-deep groove ball bearings kufanele abe ngumbuthano ekujikelezeni kwesimo sokucindezela okufanayo, indandatho izocindezelwa, hhayi nje izintambo kanye namanye amathuluzi atshayela ngqo ibhola elincane elijulile ukubhekana nobuso, ukuze kungalimazi i-Deep Groove ball bearings encane. Uma kwenzeka ukuphazanyiswa okuncane, kungasetshenziswa ekamelweni lokushisa ngendwangu yokugubha ibhola eliphansi elibhekene nebhola eliphansi, ubuso bekhanda, ngomkhono luzocindezelwa ngendlela efanayo. Uma ukufakwa kwezinto eziningi, ungasebenzisa imishini yokucindezela. Uma ucindezelekile, kufanele uqinisekise ukuthi ubuso bokuphela kwendandatho yangaphandle kanye nobuso begobolondo, ubude bezinsimbi zangaphakathi kanye ne-shaft ebhekene nokucindezela ubuso, abavumelani negebe.
1. Ukulinganisa ubukhulu be-shaft kanye ne-groove encane ebhodini elibhekene nebhola elibhekene nalo libheke ukucacisa ukucaca kwesibhakabhaka esincane esincane esithwala ibhola. Izidingo ezifanako zimi kanje: Indandatho yangaphakathi kanye ne-shaft ithatha ukuphazamiseka kokungenelela, inani lokuphazamiseka liyi-0 ~ + 4I¼m (ekulayeni okulula, Ukucaca okuphezulu lapho i-0); indandatho yangaphandle kanye ne-micro-deep groove ball bearing hole ukuze ithathe igebe ngengozi ye-0 ~ + 6 ¼m (kodwa ekugcineni kwamahhala amabhethri amabhola amancane asempumalanga esebenzisa ibhola lokuxhumana elincane le-micro-depth groove ball bearings, futhi lingakhuphuka igebe); i-axis kanye nesihlalo sobukhosi besiphetho se-2 ¼mm ngezansi, amabhethri ebhola amancane asetshenziselwa ekugcineni kwendilinga efana no-2 ¼m ngaphansi kwesiphetho sehlombe ebusweni obungaphandle kwe-2 ¼m ngaphansi; Ukufaka isikhala esihlalweni esihlalweni sokushaya phakathi kwama-4 ¼m ngaphansi; ukugoqa ingubo yangaphambili yecala langaphakathi le-axis yokushaya ngaphansi kwe-4 ¼m.